Amai vanoponesa hupenyu hwemwanasikana wavo nekushandisa Siri kufonera ER vachiita CPR | IPhone nhau
Kubva kuvhurwa kweiyo nyowani iPhone 6s uye 6s Plus, Apple iri kutarisa kusimudzira hunhu hukuru uye zvakanakira zvichienzaniswa nevakatangira mune zviziviso zvakasiyana, izvo zvatiri kuramba tichiteedzera mu iPhone News. Vatambi vakasiyana siyana nevatungamiriri vemafirimu vakabuda mukushambadzira kwakasiyana siyana uko Siri ari protagonist, kuwedzera kune cookie monster. Asi hunhu hukuru hwatino kupihwa naSiri mune yazvino iPhone mamodheru mukana wekugona kuidana usinga sunganidzwe kunetiweki yemagetsi, sezvazvaiitika mumhando dzapfuura.
Iri basa rakanakira kana isu tisingakwanise kubata iyo iPhone uye isu tinofanirwa kuseta kuverenga kuverenga, kufona, kutumira meseji ... Kuti tiite izvi isu tinofanirwa kududza kare Hey Siri. Chaizvoizvo chiitiko ichi chakachengetedza hupenyu hwemusikana ane gore-gore. Vamwe amai veAustralia vakashandisa chimiro ichi kufona 1 vachiri kuita CPR pamwanasikana wavo ane makore XNUMX okuberekwa uyo aive amira kufema.
Stacey Gleason akabata yake iPhone ndokumhanyira mukamuri remwanasikana, asi rakadonha paakabatidza rambi. Stacey akaridza mhere kuti amise basa reSiri kuti agone kufona nechimbi chimbi apo aiita CPR pamwanasikana wake aive amira kufema. Gleason akaudza BBC kuti basa iri raive rakaponesa hupenyu hwemwanasikana wake.
Siri akafona uye akabvumira amai kuti vataure neve emergency emergency vachibatsira mwanasikana wavo Giana. Ichi chiitiko chakaitika munaKurume, asi hapana chakanzwikwa nezve chiitiko ichi kudzamara Gleeson abata Apple kuti atende Siri nekumubatsira.
Ndagara ndichitamba naSiri, ini ndaifunga kuti chinhu chinonakidza. Kubva ipapo handizoregedze iyi sarudzo zvakare.
Haisi nguva yekutanga kuti mudziyo kubva kukambani uponese hupenyu hwemunhu. Rinopfuura gore rapfuura, Mumwe murume wechidiki akaponesa hupenyu hwake nekuda kweiyo yemoyo sensor yeApple Watch, sensor iyo yakamanikidza mushandisi kuenda kune emergency emergency.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 6s » Amai vanoponesa hupenyu hwemwanasikana wavo nekushandisa Siri kufonera ER vachiita CPR
"Sensor yakamanikidza mushandisi kuenda kudhipatimendi rekukurumidzira." Kuisa pfuti mumusoro wake? Handifunge kuti Apple Watch yakamumanikidza kuita chero chinhu, zvaizomupa kurudziro zvichibva pane zvaakaona, kubva ipapo kumanikidza kune nyika ...
Chinhu chakanaka haana kufanira kutangazve
Segore rega rega, chiitiko cheJune 13 cheWWDC chichave chichiratidzwa zviripo